संसदको प्रश्न, भारतले घाँटी थिच्दै टाउको खान लाग्दा नि किन लम्पसार…??-NepalKanoon.com
संसदको प्रश्न, भारतले घाँटी थिच्दै टाउको खान लाग्दा नि किन लम्पसार…??
काठमाण्डौ: व्यवस्थापिका संसदको वैठकमा सांसद अनुराधा थापामगरले आक्रोसित हुदै सरकारको नेतृत्व गरेका राजनितिक दलहरुलाई प्रति कडा अभिव्यक्ति दिएकी छिन ।
कांग्रेस प्रति रुष्ट हुदै देश जोगाउने हो भने कांग्रेसले देउवालाई हटाउन सक्नु पर्ने बताई भने भारतले खुट्टा समात्दै घाँटी थिच्दै टाउको खान लागिसक्यो नेताहरु हो के उक्त दिन कस्ले दिने ।
करोडौ जनताको मनछुने रा राष्ट्रिय भावना सहितको विचार सांसद जनताको मनछुने कुरा हिम्मत राखेर उठाइन । हेर्नुस भिडियो